HomeWararka CiyaarahaBarcelona 1-1 Napoli: Torres oo gool Rigoore ku badbaadiyay Blaugrana
February 18, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale 0
Ferran Torres ayaa dhaliyay rigoore qeybtii labaad ee ciyaarta si uu uga caawiyo barbar dhac 1-1 ah oo ay Barcelona la gashay Napoli lugtii hore ee wareega 16ka ee wareega 16ka tartanka Europa League.
Barca ayaa markii ugu horeysay ka qeyb gashay tartanka heerka labaad ee Yurub tan iyo 2003-04, waxaana ay ku riyaaqeen qaab ciyaareed fiican, laakiin wiilasha Xavi ayaa awoodi waayay inay guul u bedelaan.
Napoli ayaa hogaanka ugu qabatay ciyaarta waxaana u dhaliyay Piotr Zielinski, Daqiiqadii 29aad iyadoo Barca ay garoonka soo galisay Pedri iyo Pierre-Emerick Aubameyang, kaasoo ku bilowday kulankiisii ​​ugu horeysay tan iyo markii uu kaga soo biiray Arsenal.
Bilowga qeybta labaad Ferran Torres ayaa gool rigoore ah u dhaliyay kooxda Barcelona kaasi oo ciyaarta ka dhigay 1-1 iyadoo guud ahaan kulanka uu ku soo dhamaaday bar-baro.
Labadani kooxd ayaa mar kale ku kulmidoona Naples ka hor, Barca waxay aadi doontaa Valencia horyaalka LaLiga, Napoli ayaa dhankeeda u safri doonta Cagliari.